Mourinho oo dhaleeceeyay tababaraha Ajax kaddib markii ay ka hareen Champions League – Gool FM
(Europe) 09 Maajo 2019. Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa dhaleeceeyay macalinka Ajax Amsterdam ee Erik ten Hag, kaddib markii ay isaga hareen tartanka Champions League.
Balse macalinka reer Portugal ayaa hadana si kale ugu amaanay macalinka kooxda Ajax Amsterdam ee Erik ten Hag qeyb ka mid ah wax qabadkiisa kooxda Ajax.
kooxda Tottenham ayaa gaartay finalka koobka Champions league, kaddib markii ay goolal away ah kaga soo bexeen dhigooda Ajax, maadaama kulankii xalay ay ku adkaadeen 2-3, waxayna wada guud goolashii ka dhashay labada lugood ay isku noqonayaan 3-3.
Hadaba 56 jirkaan oo xalay marti ku ahaa shabakada ciyaaraha ee “beIN SPORTS” si uu u falanqeeyo kulankii ku dhex maray kooxaha Ajax iyo Tottenham tartanka Champions League ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan u maleynayaa, in tani ay inbadan i xanuun jineyso, mana doonayo inaan sidan iraahdo”.
“Waxaan doonayaa in 99% aan aqbalo tayada iyo shaqada weyn uu tababare Erik ten Hag ka qabtay kooxdan”.
“Balse waa inaan ku dhaleeceeyaa 1%, hadii aan runta ka hadlo qeybta labaad ee ciyaartan, waxay ahayd inay ka fiicnaadaan sidii hore”.
“Waxay u baahnaayeen inay u ciyaaraan si ka fiican sidii hore, balse ma jirin waxyaabo badan ee isbadalay, mana aysan fiicneyn”.